Hihaona amin'ireo orinasa vaovao 5 miady amin'ny satroboninahitra fanavaozana |
Location: Home » fandefasana » Vaovao » Mifanerasera amina orinasa vaovao miady amin'ny satroboninahitra vaovao
Mifanerasera amina orinasa vaovao miady amin'ny satroboninahitra vaovao
Septambra 11, 2012
Mety misy serivisy fitsangatsanganana sy vokatra tsy tambo isaina mifaninana amin'ny fizarana tsena, saingy mbola betsaka ny toerana ho an'ny fanavaozana.
Mety misy serivisy fitsangatsanganana sy vokatra tsy tambo isaina mifaninana amin'ny fizarana tsena, saingy mbola betsaka ny toerana ho an'ny fanavaozana. Noho izany, taorian'ny fahombiazan'ny fampisehoana fanavaozana tamin'ny taon-dasa, EyeforTravel dia nanangona dimy amin'ireo basy tanora mampanantena indrindra amin'ny indostria mba hanambara ny fomba kasainy hanakorontana sy hanesorana ny tontolon'ny fitsangatsanganana an-tserasera amin'ny taona ho avy.
Amin'ny herinandro ambony ao amin'ny TDS Amerika Avaratra, ireo orinasa dimy ireo dia hiditra ao amin'ny lavaky ny dragona indostrialy fitsangatsanganana ary hanao fitsapana ny maodelin'ny orinasany. Ho henjana ny fanontaniana ary iray ihany no hody mitondra ny satroboninahitra “innovator”. Talohan'ny hetsika EyeforTravel.com's Pamela Whitby sy Ritesh Gupta dia nametraka ny orinasa tamin'ny diany.
Ny voalohany amin'ny tsipika mitifitra dia MyGola, fitaovana hafa momba ny drafitry ny dia. Inona ary no tena mampiavaka an'ity? Anshuman Bapna, Lehiben'ny Tale Jeneralin'ny orinasa sady mpiara-manorina dia nilaza fa tsy nisy olona tena niatrika ny olan'ny “paralysis ny mpandeha” sy ny isan'ny safidy fitsangatsanganana an-tserasera. Ny Mygola dia mikendry ny ho lasa sehatra lehibe indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny fanangonana “fikasana fitsangatsanganana” lalina sy marina araka izay tratra.
Vao haingana, nanontany olona maromaro izahay hoe inona no mafana ary inona no heveriny fa hype amin'ny indostrian'ny dia. Ny mpanatanteraka ambony iray dia tsy resy lahatra tamin'ny maha-ilaina ny fitaovana fandrindrana dia. Inona àry no mampiavaka ny MyGola?
ANSHUMAN BAPNA: Mbola olana lehibe farany amin'ny dia ny fanomanana dia. Amin'izao fotoana izao, sarotra be io dingana io, ary i Mygola dia te-hanao izany ho tsotra. Folo taona mahery lasa izay, nanova ny fitsinjarana ny fitsangatsanganana ny Internet tamin'ny alalan'ny fanaovana ny vidiny ho mangarahara sy azo ampiasaina ho an'ny rehetra. Nanana tolotra, vokatra ary fitaovana maro be ho an'ny mpandeha izahay, saingy ny fampanantenana safidy be dia be dia nanjary nalemy ny safidy tsy manam-petra. Nanadihady mpandeha an-jatony àry izahay, ary nisy zavatra telo nipoitra. Ny olona dia aingam-panahy avy amin'ny hafa fa tsy namana fotsiny, te-hiasa tanteraka, azo zahana manokana, drafitra fitsangatsanganana finday (tsy lisitra fotsiny), ary te hiara-hiasa amin'ny hafa eny an-dalana. Izany no kendren'i Mygola hampiarahana amin'ny interface tsara iPad-centric.
Ny fanavaozana manaraka natrehanay dia Triometric, orinasa rindrambaiko izay namolavola vokatra fitantanana ny fanisana izay milaza fa manatsara tanteraka ny tahan'ny fijerena ny boky, ny vola miditra ary ny tombom-barotra. Ary manao izany tsy mila manoratra tanteraka ny boky tantara. Araka ny voalazan'ny Lehiben'ny mpanatanteraka Matthew Goulden, dia mahavita izay tsy vitan'ny orinasa hafa ankehitriny. Fampanantenana lehibe izao!
Ho an'ny orinasan-trano fandraisam-bahiny, OTA, orinasa manofa fiara, sy ny sisa, fanamby ny fiantohana fa ny mpanjifanao dia afaka miditra amin'ny lisitra marina amin'ny fotoana mety, saingy azo antoka fa ny ankamaroan'ny orinasa dia namaha ity olana ity? Ary inona no hafa ataonao?
BAPNA: Ho gaga ianao fa mbola mahazatra ny mpanelanelana, izay mipetraka eo anelanelan'ny Expedia na Lastminute.com sy ny mpanjifa, mahazo fiverenana "tsy misy" rehefa mametraka fangatahana fanisana. Mazava ho azy fa misy orinasa hafa manao fanaraha-maso amin'ny Internet, fa ny USP an'ny Triometric dia ny fahafantaran'ny vokatra ny tena ao anatin'ny fifampiraharahana atao ao anatin'ny XML. Afaka mijery ao anatin'ilay antontan-taratasy mipetaka amin'ny fifampiraharahana amin'ny Internet izy ary mamoaka fampahalalana manokana momba ny mpanjifa - efitrano inona, hotely inona, sns. Ary manao izany amin'ny fotoana tena izy ary tsy misy dikany. Midika izany fa afaka mandrefy tsara ny traikefan'ny mpampiasa farany izahay ary mitatitra ny hetsika ataony, tsy mila miditra na mametraka kaody amin'ny milina mpanjifa na mpizara fotodrafitrasa. Noho izany, ny tombony hafa dia ny vokatra dia mifanaraka amin'ny zavatra efa misy.
Toa fivoarana tsara izany ary hojerena.
Manaraka eo amin'ny lisitry ny mpanavao anay ny fanombohana Rosiana, i-Rates. Ny lehiben'ny mpanatanteraka Vadim Asadov iRates dia manoritsoritra ny vahaolana amin'ny fitantanana ny fidiram-bolan'ny orinasa ho "siansa rocket nofonosina amin'ny interface calculator." Izay ilaintsika ihany! Izy io, hoy izy, no tsy vitan’ny atidohan’olombelona mihitsy.
Ny fitantanana ny fidiram-bola dia andraikitra tena ilaina nefa indraindray tsy dia misy dikany amin'ny orinasa fitsangatsanganana, saingy maro ireo orinasa mivarotra vahaolana RM no miezaka manova izany fomba fijery izany. Inona no mampiavaka ny anao?
VADIM ASADOV: mpahay fizika teorika aho amin'ny fanabeazana, ary minoa ahy, tsy afaka manao kajy ny vidiny tsara indrindra ho an'ny hotely tsy misy dikany aho amin'ny andro tsy misy dikany. Ny rafitray no manao izany. Ny USP anay dia ny hanome trano fandraisam-bahiny antonony misy loharanon-karena voafetra ho fitaovana manokana tsotra, mora ampiasaina, vonona handeha ary tena takatry ny saina izay hanampy azy ireo hitsitsy fotoana amin'ny fitantanana ny vidiny sy ny vidiny. hampitombo ny fidiram-bolany sy ny farany ambany. Ny rindrambaiko no mora indrindra amin'ny tsena ary izy irery no fitaovana RM izay mirona handoa ho azy mandritra ny roa andro voalohany amin'ny fitsarana. Na manapa-kevitra ny hitazona ny programa aorian'ny fitsarana ny mpitantana hotely na tsia, dia manome antoka izahay fa hianatra zavatra betsaka momba ny RM sy ny vola miditra amin'ny hotely izy.
Ny orinasa roa farany miady amin'ny satroboninahitra fanavaozana an'i EyeforTravel ao amin'ny TDS North America, amin'ny herinandro ho avy dia Georama sy Optiontown.
Naorin'i Nihal Advani, Georama dia fitaovana fandrindrana dia mifototra amin'ny sarintany. Milaza ho sehatra fitsangatsanganana miompana amin'ny sarintany voalohany eran-tany izy io ary hany vahaolana tokana ho an'ny mpandeha, mampitambatra ny votoaty tsara indrindra, ny saran-dalana ary ny tambajotra sosialy ao anaty tafo iray. Nilaza ny orinasa fa manampy ireo mpandeha handrafitra sy hamandrika ary hizara ny diany amin'ny “sarintany ifanakalozan-kevitra tokana” izany. Ny tranonkala dia manana interface tsotra sy malefaka mametraka ny fanontaniana izay eritreretintsika voalohany indrindra rehefa manomana dia: fantatrao hoe aiza no tianao haleha? Omena safidy telo ianao raha tsindrio - tsia, angamba, eny. Toa nanamora ny fikarohana.
Optiontown, naorin'i Sachin Goel, dia mamela anao "hankafy safidy fitsangatsanganana tokana." Ny tanjon'ny orinasa dia ny hamolavola safidy fitsangatsanganana tsy manam-paharoa sy manavao izay manome lanja ho an'ny mpandeha sy ny mpamatsy fitsangatsanganana. Manana vokatra telo izy io: ny safidy Upgrade Travel (UTo), izay ahafahan'ny mpandeha mivoatra amin'ny kilasy ambony seza amin'ny vidiny mirary. Ny safidy Flexibility Reward (FRo) dia mamela ny mpandeha hahazo valisoa amin'ny maha-flexible azy. Ary ny programa ESo, ny safidy seza foana, dia manome fahafahana ireo mpiady an-dalambe hahazo seza foana voatendry eo akaikin'ny sezany amin'ny vidiny mirary mba hahafahan'izy ireo mandry sy miala sasatra.
Noho izany dia misy zavatra maro tsy andrandraina momba ny fanavaozana ny dia amin'ny 2013. Lazao ny hevitrao ary fidio ny "Iray hojerena amin'ny 2013!"
Raha te hamandrika ny iray amin'ireo toerana sisa tavela ao amin'ny TDS North America, mifandraisa amin'ny Talen'ny Summit [email voaaro] faran'izay haingana indrindra!
Ny sambo seychelles dia milentika amin'ny tafiotra
Ny hotely manadino no manadino indrindra mety hamela charger sy adaptatera
Nanjary azo antoka kokoa ny manidina eny amin'ny lanitry ny Hawaii
Saint Lucia dia namarana ny fitiliana ireo mpandeha vita vaksiny, alohan'ny...
Nihantona ny fisintonana Bitcoin satria nianjera ho 18 ny crypto...
Montréal dia nanitatra ny fanjakana vonjy maika amin'ny COVID-19 ho an'ny dimy ...
Traikefa Safari 5 tsara indrindra atao any Uganda
Horohorontany nanerana an'i Mindanao ao Filipina
Fianarana faran'izay haingana ao amin'ny IMEX any Frankfurt
Tonga any Seychelles ny mpilomano Extreme André Wiersig...
Seychelles dia lasan'i Seychelles an'i Eoropa Atsinanana miaraka amin'ny blitz tsena
Nifidy an'i Geoff Freeman ho...
Seychelles dia nahazo ny Loka Maitso Travel Italiana 2022
Nofoanan'ny British Airways ny fahavaratra malaza an-jatony...
Nankatoavin'ny tompon'andraikitry ny Airbus ny fanapahan-kevitra vaovao AGM 2022
Seychelles dia mijery fitomboan'ny tsena lehibe kokoa avy amin'ny Baltika
Barbados anisan'ny Vondrona Elite ho Lova Iraisam-pirenena UNESCO...
Ny valan-javaboary malaza indrindra any Etazonia
Ny fiarahana, ny fanantenana ary ny herim-po dia manamarika ny faha-20 taona niorenan'ny...
Connecticut lasa fanjakana IGLTA Global Partner voalohany